Bellerín oo fariin u diray jamaahiirta Arsenal, kadib markii la xaqiijiyay in uu garoomada seegayo inta ka dhiman xili ciyaareedkan – Gool FM
Bellerín oo fariin u diray jamaahiirta Arsenal, kadib markii la xaqiijiyay in uu garoomada seegayo inta ka dhiman xili ciyaareedkan
(Europe) 22 Jan 2019. Difaaca garabka midig ee kooxda Arsenal Héctor Bellerín ayaa sheegay in xaaladiisa caafimaad ay haatan wanaagsan tahay, kadib markii uu helay baxnaano caafimaad xiliyadii lasoo dhaafay.
Héctor Bellerín ayaa la xaqiijiyay inuu garoomada ka maqnaanayo mudo dhan 6 ilaa iyo 9 bilood.
Bellerín ayaa dhaawac daran kasoo gaaray dhanka jilibka lugtiisa bidix inta lagu gudi jiray kulanka sabtidii lasoo dhaafay ay ku wada ciyaareen kooxda Chelsea horyaalka Premier League.
Hadaba laacibka kooxda Arsenal ayaa wuxuu ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka, qoraal uu ugu talagalay jamaahiirta Gunners wuxuuna yiri:
“Kama fogaan kartid caqabadaha nolosha”.
“Waxay ahayd maalmo adag laakiin waan wanaagsanahay, waxaana diyaar u ahay caqabad kasta ee hortaagan, waad ku mahadsan tihiin fariimaha aad ila soo wadaagteen, sida aad ii garab taagan tihiin iyo jaceylkiina, runtii ma rumeysan kartiin”.
“Ka ciyaarista kooxda Barcelona waa riyo weyn ee ii rumoowday” – Boateng oo ka hadlay dareenkiisa
"Aniga ayaa SABAB u ah Dhaawacyada Joogtada ah ee NINKEYGA.".- Xaaska Saxiixa Cusub ee Barcelona Boateng oo SHEEKO YAAB LEH Daaha ka rogtay!!